UV Germicidal Oriọna, UV Light, Ultraviolet Light - Kanfur
254nm UVC Oriọna
222nm Far UVC oriọna
UV Sterilizer igbe
Igwe nyocha ikuku
anyị ga-eme ka ị hụ
nweta mgbe niile kacha mma
"Ezigbo mma, ọrụ kacha mma" bụ ebumnuche ụlọ ọrụ anyị, Kanfur ga-egwu uru teknụzụ nke anyị iji nye ndị ahịa ngwaahịa kacha mma, ọnụ ahịa kachasị mma, netwọọdụ ahịa zuru oke yana ọrụ ahịa ma gbalịa ike anyị niile ime Ahụike Mmadụ!
ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ
Nwoke ịga ụlọ ọgwụ, disinfection, Peculiar isi wepụ, na-ewetara gị a heathy ndụ
35W UV oriọna
uv ìhè Trolley
Kanfur nwere obi ụtọ iwebata 222nm Far UVC Lamps, akara anyị nke 222nm Far UV-C excimer lamp modulu maka microbial Mbelata ngwa.
Enwere ike iji oriọna 222nm Far UVC oriọna nwere ike iji ya mee ihe n'enweghị nsogbu na oghere na-enweghị nsogbu na-enweghị nsogbu ọ bụla nye ụmụ mmadụ mgbe ejiri ya mee ihe ngosi nke ugbu a nke American Conference of Government of Industrial Hygienists (ACGIH®) kwadoro ma ọ bụ ihe IEC 62471 chọrọ.
Enweghị mmerụ ahụ maka mmadụ na anụmanụ, dị nchebe karịa oriọna 254 nm UVC
Teknụzụ Nchọpụta Nchekwa nke Onye Aka Aka Gụnyere iji hụ na anwude Ntanata 222nm
Ebere Mercury - Enyi na Enyi
Igha Mkpụrụ Igwe Germicidal Dị Irè
Mbelata dị irè nke Viruses, Bacteria, na Spores
Wide Operating okpomọkụ
Ntinye / Gbanyụọ ozugbo na Ike Mmepụta zuru ezu
Enweghị Mbelata ndụ site na mgbe niile / na-agbatị
anyị ga-ahụ na ị ga-enweta mgbe niile
Mmepụta kwa afọ
Kanfur nwere akara mmepụta nke aka anyị nke nwere akara teknụzụ na teknụzụ dị elu, mmepụta kwa afọ ruru 100000.
Ndị Ọkachamara Ọrụ
Ọkachamara ma R & D kwụsiri ike, ndị ọrụ na ndị ahịa, yana ndị ọrụ 160, ụlọ ọrụ na-ewebata talent oge niile.
Patent akwụkwọ enwetara
Na a ọkachamara R & D otu, niile na ngwaahịa na-onwe ha mepụtara na-emepụta site anyị, anyị nwetara 50 patented technology asambodo na ..
Ahịa ahịa kwa afọ
Domestic ahia na mba ọzọ ahia abụọ ire otu, exported karịa mba 50 gburugburu ụwa na Kwa Afọ ahịa ruo usd4000000.
Banyere ụlọ ọrụ ahụ
Independent Production akara
akwụkwọ nke nsọpụrụ
Kedu ndị mmadụ na-ekwu okwu
UV oriọna mara ezigbo mma ma kwụsie ike, m nwetara ma ọ bụrụ na nwa m. O nwekwaa akara ntanetị, nke dị mfe ịrụ ọrụ. Ọ bụ n'ezie a humanization imewe. Ọ bụ ezigbo ezigbo ahụmịhe ịzụ ahịa.
Nkwupụta DHL dị ọsọ ọsọ, naanị ụbọchị ise ka m natara oriọna ultraviolet m. Ejikwala m ya dịka ntuziaka ya si dị. Ọ dị nfe, iji ọgbụgba oge atọ, m kwenyere na ọ ga-enye m ezigbo ụlọ obibi.
Enwere m afọ ojuju na oriọna UV a. A na-akwakọba ya nke ọma ma zigara ya ngwa ngwa. Ọ dị mfe na ngwa ngwa iji na-ime akara. Ime ụlọ, ime ụlọ, ime ụlọ ịwụ na kichin niile ejiri ọgwụ mmịnye ọgwụ, daalụ
Ase maka price ndepụta
Ebe ọ bụ na ya oruru, anyị factory e-emepe emepe mbụ ụwa na klas ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ nke àgwà mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo ezigbo aha na ụlọ ọrụ ma nwee ntụkwasị obi bara uru n'etiti ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie ..
Disinfection na Far-UV (222 nm Ultraviolet li ...
Nyocha nke teknụzụ Far-UV (222 nanometer) na ikike disinfection ya. Nsonaazụ nke ọrịa ọrịa COVID-19 bụ mkpawanye mkpa maka nchekwa, oghere ọha na eze. Ọ dị oke mkpa iji belata ihe egwu na ụlọ ọrụ ụgbọ elu azụmahịa, nke kpaliri otu ijeri mmadụ gafee ụwa na 2 ...
Teknụzụ Germicidal Oriọna
Germicidal Oriọna Technology Mgbe ị na-eme nchọpụta UVC Germicidal Fixtures, ị nwere ike ịlele ọtụtụ ụdị teknụzụ oriọna na nhazi. Ihe oriọna UVC niile nwere quartz envelopu nwere Mercury na gas ndị ọzọ na electrodes. Mgbe oriọna dara, ike b ...
Uru nke UV-C Disinfection
Uru nke UV-C Disinfection Systems bụ Ọtụtụ, Gụnyere: Ọ bara uru maka ụdị micro-organism niile, gụnyere nje bacteria, nje, fungi na protozoa Enweghị ngwaahịa disinfection (DBPs) na gburugburu ebe obibi f ...
Ogo nke mbụ, iguzosi ike n'ezi ihe mbụ
Ime ụlọ 102, Quanshan Mining Science Park, Xuzhou obodo, Jiangsu ógbè, China 221000